အားကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး FANI သတင်း…. ည နေ (၄း၄၇)နာရီထုတ်ပြန်ချက်…. - Real Gaming Myanmar
အားကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး FANI သတင်း…. ည နေ (၄း၄၇)နာရီထုတ်ပြန်ချက်….
By Realman /5months ago / Local News / No Comments
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၊ အရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဌာနမှ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဖန်နီ” (FANI) နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူသို့ အသိပေးပန်ကြားချက်
(၂၉-၄-၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ ညနေ (၅:၀၀)နာရီ …
Source : EOC
၁။ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏(၂၉-၄-၂၀၁၉)ရက်နေ့ မုန်တိုင်းသတိပေးချက် များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော အီကွေတာ အနီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း (Cyclonic Storm) “ဖန်နီ” (FANI) သည် မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ထရင်ကိုမာလီမြို့ (Trincomalee) ၏ အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင်(၃၁၀)ခန့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ချင်းနိုင်မြို့(Chennai)၏ အရှေ့ တောင်ဘက် မိုင်(၄၃၀)ခန့်၊ မာချီလီပတ္တနမ်မြို့(Machilipatnam)၏ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင်(၅၂၀ ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း “ဖန်နီ” (FANI) သည် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး
လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည့် အခြေအနေ မရှိသေးပါသဖြင့် အဝါရောင်အဆင့်ဟု သတ်မှတ်ထားပါကြောင်း၊ မုန်တိုင်း၏ဗဟိုချက်လေဖိအားမှာ (၉၉၈) ဟက်တိုပါစကယ်နှင့် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင်(၅၅)မိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းမုန်တိုင်းသည် နောက်(၁၂) နာရီအတွင်း အားကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Severe Cyclonic Storm) အဖြစ်သို့ လည်းကောင်း၊ နောက်(၃၆)နာရီအတွင်း အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အဖြစ်သို့ လည်းကောင်း ရောက်ရှိနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း “ဖန်နီ”(FANI)သည် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားပြီး၊ နောက် (၇၂)နာရီအတွင်း မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ကွေ့ကာ ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းချက် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
၂။ www.windyty.com တွင်(၂၉-၄-၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွေ့ရှိချက်များအရ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဖန်နီ” (FANI) သည် (၂၉-၄-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၂-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနိုင်သည့် အခြေအနေကို ပြသထားပါသည်။ (၃-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ကွေ့၍ ရွေ့လျားနိုင်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ (Visakha- patnam) မြို့အနီးမှ ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း (၉၅)မိုင်နှုန်းဖြင့် ဝင်ရောက် နိုင်ကာ (၄-၅-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှစ၍ အားပျော့လာနိုင်ပြီး(၆-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် အားပျော့ ပျက်ပြယ်သွားနိုင်မည့် အခြေအနေကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
၃။ https://www.metoc.navy.mil/jtwc/jtwc.html မှ (၂၉-၄-၂၀၁၉) ရက်နေ့ တွေ့ရှိချက်များ အရ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဖန်နီ” (FANI) သည် (၂၉-၄-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၁-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဦးတည် ရွေ့လျားနိုင်ပြီး (၂-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ကွေ့ကာ ရွေ့လျားနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပြီး (၃-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဖန်နီ” (FANI) ၏ အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် (၁၂၆)မိုင်မှ (၁၅၅)မိုင်နှုန်းခန့်ရှိနိုင်သည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
၄။ www.tropicaltidbits.com ၌ ဖော်ပြထားချက်များအရ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဖန်နီ” (FANI) သည် (၂၉-၄-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၁-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိအနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနိုင်ပြီး (၂-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်အရှေ့-အရှေ့မြောက် ဘက်သို့ကွေ့ကာ ရွေ့လျားနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ (၆-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်အနီးမှ ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်သွားနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
၅။ (၂၉-၄-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) ၏ Disaster Monitoring and Response System (DMRS) https://dmrs.ahacentre.org/dmrs/ မှ ရရှိသော အချက်အလက်များအရ ယခုဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း FANI ၏ သက်ရောက်နိုင်မှု အဝန်းအဝိုင်းပမာဏသည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကျရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
၆။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်သူများအနေဖြင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော အီကွေတာ အနီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့တွင် လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဖန်နီ” (FANI) နှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများအား မယုံကြည်ကြ ပါရန်နှင့် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထုတ်ပြန်သည့် မိုးလေဝသအခြေအနေများအား စောင့်ကြည့်၍ အကြံပြုသတိပေးချက်များအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြပါရန်နှင့် ပြည်တွင်းလေကြောင်းပျံသန်းရေး၊ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိ ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများအနေဖြင့်လည်း ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထပ်ဆင့် အကြံပြု တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
၇။ ပြည်သူများအနေဖြင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖုန်း – ၀၆၇-၃၄၀၄၆၆၆ နှင့် ၀၆၇-၃၄၀၄၇၇၇ များသို့ (၂၄)နာရီ ဆက်သွယ်အကူအညီ တောင်းခံနိုင် ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Credit – Department of Disaster Management- Myanmar
အားကောငျးသောဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျးကွီး FANI သတငျး…. ည နေ (၄း၄၇)နာရီထုတျပွနျခကျြ….
၂၉-၄-၂၀၁၉ ည နေ (၄း၄၇)နာရီ။
၂၀၁၉ နှဈ၊ ဧပွီလ(၂၉)ရကျနေ့ ည နေ(၃း၃၀)နာရီအခြိနျတိုငျးတာခကျြအရ လှနျခဲ့တဲ့(၆)နာရီအ တှငျးက ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး FANI ဟာ တဈနာရီ (10) ကီလိုမီတာ နှုနျးနဲ အ နောကျမွောကျ ယှနျးယှနျးကိုရှေ့လြှားလာ ခဲ့ပွီး၊ အိန်ဒိယနိုငျငံ Chennai မွို့ရဲ့ အ ရှေ့ တောငျ ယှနျး ယှနျး (၄၅၀) ကီလိုမီတာအကှာ ရပွေငျပျေါတှငျ ဗဟိုပွုနပေါတယျ။
ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး Fani ဟာ ပိုမိုအားကောငျးလာပွီး အားကောငျးသော ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျးကွီး (Severe Cyclonic Storm) အဖွဈသို့ရောကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။
မုနျတိုငျး၏အငျအားမှာ Dvorak Number T3.0( လတေိုကျနှုနျး 45 knots) ရှိနပွေီး၊ နောကျ ၃၆-၄၈ နာရီအတှငျး တှငျ မုနျတိုငျးဟာ မွောကျ အ ရှေ့ မွောကျ ယှနျး ယှနျးကို စတငျရှေ့လြှားမယျလို့ခနျ့မှနျးရပါတယျ။
နောကျ(၉၆)နာရီအကွာမှာ လတေိုကျနှုနျး110 knots ခနျ့ရှိလာနိုငျပွီး အားအလှနျ ကောငျးသောဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး ကွီးအဖွဈကိုရောကျရှိလာနိုငျပါတယျ။
နောကျ နာရီ(၁၂၀) အကွာမှာ အိန်ဒိယနိုငျငံအရှမွေ့ောကျကမျးခွကေိုဖွတျကြျောဝငျရောကျမယျလို့ခနျ့မှနျးရပါတယျ။
မှတျခကျြ။ မုနျတိုငျးကွီးဟာ အားအလှနျကောငျးတဲ့အဆငျ့ကို ရောကျရှိလာနိုငျတဲ့အပွငျ လတ်တီတှဒျအားဖွငျ့လညျး 10°N အောကျနိမျ့နေ သေးသောကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ မုနျတိုငျးအန်တရာယျလုံးဝစိတျခရြသော အခွေ အနမေဟုတျသေးပါ။
ခနျ့မှနျးခကျြအတိုငျး ရှေ့ လြှားပါက မုနျတိုငျးအန်တရာယျလုံးဝကငျးရှငျးနိုငျပါတယျ။ သို့ရာ တှငျ အခြိနျနဲ့အမြှ အွေ ပာငျးအလဲရှိနိုငျသော သဘာဝဖွဈစဉျဖွဈသဖွငျ့ မုနျတိုငျးသတငျးမြားကို အခြိနျနဲ့ တပွေးညီ စောငျ့ကွညျ့ကွပါရနျ နှိုးဆျောအပျပါတယျ။
ဒေါကျတာထှနျးလှငျ
Previous: တောင်ကြီး လေးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုအကြောင်း သိရသမျှအပြည့်အစုံ
Next: အပူချိန်အရမ်းမြင့်တက်နေပါတယ် …..ဒီနေ့ အပူချိန်ဟာ ၄၃ ´C အထိ တက်လာပါပြီ……